Momba anay - Kaiyuan Chicheng Abrasive Material Co., Ltd.
Tianjin Yousheng Trading Co., Ltd. dia naorina tamin'ny 2003. Orinasa mpivarotra miompana amin'ny varotra ao an-toerana sy any ivelany, fitantanana tena ary fanafarana sy fanondranana entana sy haitao. Ny orinasa dia miorina ao amin'ny Distrikan'i Hedong, Tianjin. Amin'ny maha-tanàna seranan-tsambo azy dia manana tombony voajanahary i Tianjin amin'ny fandraharahana manafatra sy manondrana, ary mety ny fitaterana.
Ny vokatra lehibe ao amin'ny orinasa dia misy ankehitriny: vokatra simika potassium fluoborate (afa-tsy ny entana mampidi-doza sy ny fanafody mialoha), akora (zirconium corundum, abrasives vita amin'ny seramika, cryolite), fitaovana fanararaotana (kodiarana fitotoana isan-karazany, kodiarana pejy, puce, kapila emery) ary lamba indostrialy (polyester rehetra, landihazo rehetra, landihazo polyester) ho an'ny lamba emery sns.
Amin'izao fotoana izao, ny haben'ny varotra ataon'ny orinasa dia mitombo isan'andro, ary ny orinasa dia nahazo ny fahatokisan'ny mpanjifa anatiny sy avy any ivelany miaraka amin'ny kalitaon'ny vokatra sy ny lazany tsara! Izany dia mahatonga ny orinasanay sy ny vokatra ananantsika hanana laza malaza sy fizarana tsena eto an-toerana sy any ivelany. Mandritra izany fotoana izany dia mametraka ny tombontsoan'ny mpanjifanay hatrany izahay, ary manolo-tena amin'ny fanomezana vokatra sy serivisy tsara kokoa ho an'ny mpanjifanay tsirairay izahay.
Filozofianay momba ny asa: "Miorina amin'ny fahamarinana, mpanjifa aloha"
Tombon-tsoa entinay: "Ampy ny famatsiana sy ny vidiny mirary"
Mino aho fa ny fiaraha-miasa rehetra dia hahatonga antsika hifanakaiky!